Dr. Tint Swe's Writings: Hepatitis C အသည်းရောင် (စီ) ဆိုတာ
၂ဝ၁၄ ဧပြီလ WHO (အပ်ဒိတ်) ဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းရောင် (စီ) ဆိုတာ ဗိုင်းရပ်စ်ကနေဖြစ်စေတဲ့ ရက်တိုနဲ့ နာတာရှည် ကူးစက်ရောဂါဖြစ်တယ်။ ခဏလေးခံစားရတာနဲ့ တသက်တာဖြစ်နေတာအထိမတူပါ။ သွေးကတဆင့် အဓိက ကူးစက်တယ်။ (စီ) ပိုးကို ၁၉၈၉ မှာ စတွေ့ခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူပေါင်း သန်း ၁၃ဝ ကနေ ၁၅ဝ အထိ ကူးစက်ခံထားရတယ်။ သူတို့ထဲက အတော်များများဟာ အသည်းခြောက်တာနဲ့ အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ကြတယ်။ တနှစ်မှာ လူပေါင်း ၃၅ဝဝဝဝ ကနေ ၅ဝဝဝဝဝ အထိသေဆုံးနေကြရတယ်။
ဆေးတွေနဲ့ ၅ဝ-၉ဝ% အထိပျောက်အောင်ကုသပေးနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ရောဂါရှာဖွေမှုနဲ့ ဆေးကို လက်လှမ်းမီမှုက နည်းနေတယ်။ စီပိုးကာကွယ်ဆေးမပေါ်လာသေးပါ။ ၁၅-၄၅% မှာ ဘာမှမခံစားရပဲ ၆ လ အတွင်းမှာ အလိုလို ပျောက်သွားကြတယ်။ ၅၅-၈၅% တို့မှာ နာတာရှည်ဖြစ်လာတယ်။ ၁၅-၃ဝ% မှာ အသည်းခြောက် လာတယ်။
ဆေးထိုးအပ်မျှသုံးသူတွေ၊ ဆေးရုံ-ဆေးခန်းမှာအလုပ်လုပ်ကြရသူတွေ၊ သွေးသွင်းရသူတွေ၊ လိင်ကတဆင့်ကူးနိုင်တယ်။ မိခင်ကနေ ကလေးကိုတော့နည်းနည်းသာကူးတယ်။ ကလေးကိုနို့တိုက်လို့မကူးပါ။ သာမန်ထိကိုင်လို့လည်းမကူးပါ။ အစာအတူစားလည်းမကူးပါ။
ပိုးဝင်လာပြီးနောက် ၂ ပါတ်ကနေ ၆ လနေမှသာ ခံစားရတာပေါ်လာတယ်။ ၈ဝ% မှာ ဘာမှမခံစားရဘူး။ ခံစားရရင် ကိုယ်ပူမယ်၊ အားယုတ်မယ်၊ အစားပျက်မယ်၊ ပျို့မယ်၊ အန်မယ်၊ ဗိုက်နာမယ်၊ ဆီးအရောင်ရင့်မယ်၊ ဝမ်းအရောင်ပျော့မယ်၊ အဆစ်တွေနာမယ်၊ အသားဝါမယ်။
ပိုးဝင်ခံထားရတာကိုစမ်းသပ်နည်း ၂ ဆင့်ရှိတယ်။ (၁) ဆန်ခါတင်စစ်နည်း anti-HCV antibodies (အင်တီဘော်ဒီ) စမ်းနည်းနဲ့ (၂) (အင်တီဘော်ဒီ) စမ်းနည်းအပေါင်းပြသူကို nucleic acid test for HCV RNA စမ်းနည်းဆက်လုပ်ရတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ပိုးဝင်ခံရပေမယ့် ၁၅-၄၅% မှာ ကင်းစင်သွားလို့ဖြစ်တယ်။ အဲလိုလူတွေမှာ anti-HCV antibodies စမ်းရင်အပေါင်းပြနေမယ်။ ဆေးကုစရာတော့မလိုပါ။
နာတာရှည်အသည်းရောင် (စီ) ရှိနေတာသိသူကို အသည်းအခြေအနေစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ရမယ်။ liver biopsy အသည်းစ ထုတ်ယူစစ်ဆေးနည်းလည်းပါတယ်။ genotype of the hepatitis C strain (ဂျီနို) အမျိုးအစားခွဲခြားရမယ်။ (၆) မျိုး ရှိတယ်။ ဆေးကုရမှာ မတူကြပါ။ တချို့မှာ HIV နဲ့တွဲရှိနေတယ်။
လူတိုင်းဆေးကုစရာမလိုပါ။ လိုသူတွေကိုကုသတာက ပျောက်စေဘို့ဖြစ်တယ်။ ပျောက်-မပျောက်ဆိုတာ ဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစား + ဆေးကုသနည်းစတဲ့ အချက်အလက်တွေအပေါ်မူတည်တယ်။ လက်ရှိစံသတ်မှတ်ထားတဲ့ ကုသနည်းကတော့ (Interferon + Ribavirin) တွဲပေးနည်းဖြစ်တယ်။ ဂျီနိုအမျိုးအစားအကုန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ Interferon ဆေးကို နေရာတိုင်းမှအလွယ်နဲ့မရတတ်ပါ။ တချို့ကမခံနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်ကုသရတာ ရှုတ်ထွေးတယ်။ ခုထိတော့ ဒီဆေး ၂ မျိုးကနေ အသက်ကယ်နိုင်တယ်။ နောက်ပေါ်ထိရောက်တဲ့ဆေးတွေကို Directly acting antiviral agent (DAAs) စားဆေးဖြစ်တယ်။ ပျောက်ကင်းနှုန်း ပိုများတယ်။
၁၉၉၁-၂ဝဝ၁ မှာပေါ်တဲ့ဆေးတွေကတော့ -
1. Interferon (1991)
2. Ribavirin + standard interferon (1998)
3. Pegylated interferons (2001)
5. Pegylated interferon + ribavirin တွေဖြစ်တယ်။
(က) Direct acting antivirals (DAAs) ဆေးတွေဖြစ်တယ်။ ၂ဝ၁၁ မှာပေါ်တယ်။
- Telaprevir (Incivek) + Pegylated interferon (Pegasys) + Ribavirin (ဂျီနို) အမျိုးအစား (၁) ၂ဝ၁၁။
- Boceprevir (Victrelis) + Pegylated interferon (Pegasys) + Ribavirin (ဂျီနို) အမျိုးအစား (၁) ၂ဝ၁၁။
(ခ) Sofosbuvir ဆေးကို (ဂျီနို) အမျိုးအစားအားလုံးကိုပေးနိုင်တယ်။ ဆေးကိုခံနိုင်ကြတာ ပိုများတယ်။ ရက်တိုတိုနဲ့ ရတယ်။ HIV-HCV co-infection တွဲရှိနေသူတွေကိုလည်း ပေးတယ်။
- Sofosbuvir (Sovaldi) + Peginterferon (Pegintron) + Ribavirin (ဂျီနို) အမျိုးအစား (၁) ကို ၂ဝ၁၃ ကစပြီး ပေးတယ်။
- Sofosbuvir (Sovaldi) + Ribavirin (ဂျီနို) အမျိုးအစား (၂ + ၃) ကို ၂ဝ၁၃ ကစပြီးပေးတယ်။ HIV တွဲရှိနေရင် (ဂျီနို) အမျိုးအစားအားလုံးကို ပေးတယ်။
(ဂ) Simeprevir ဆေးကိုခံနိုင်ကြတယ်။ ရက်တိုတိုနဲ့ရတယ်။
- Simeprevir (Olysio) + Peginterferon (Pegintron) + Ribavirin (ဂျီနို) (၁) ကို ၂ဝ၁၃ ကစပြီးပေးတယ်။
မှတ်ချက်။ Sofosbuvir (Sovaldi) ဆေးဆိုတာ ၁ ပြားကို ဒေါ်လာ ၁ဝဝဝ ပေးရတယ်။ ဈေးချိုတာ မကြာခင်လာမယ်။
Hepatitis C Genotype6infection အသည်းရောင် (စီ) ဂျီနို ၅ နဲ့ ၆ ဆေးများ
Ledipasvir (90 mg)/Sofosbuvir (400 mg) တွဲထားတဲ့ဆေး တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၁၂ ပါတ်။
Sofosbuvir 400 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၁၂ ပါတ်။
Ribavirin 1000 mg/day တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၁၂ ပါတ်။ (ကိုယ်အလေးချိန် ၇၅ ကေဂျီထက်မလေးရင်)
1200 mg/day တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၁၂ ပါတ်။ (ကိုယ်အလေးချိန် ၇၅ ကေဂျီကျော်ရင်)
Peginterferon alfa-2a 180 mcg အရေပြားအောက်ထိုးဆေး၊ တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၁၂ ပါတ်။ +
Peginterferon alfa-2b 1.5 mcg/kg အရေပြားအောက်ထိုးဆေး၊ တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၁၂ ပါတ်။ +
• Monotherapy with Peginterferon, Ribavirin, oraDirect-Acting Antiviral
• Telaprevir- or Boceprevir-based regimens